सरकारको गम्भिर असहमति पछि विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस मिसन परिमार्जनका लागि नेपालमा
काठमाडौं । विश्व बैंकले व्यवसाय गर्ने वातावरणको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिबेदनमा चित्रण गरिएको नेपालको अवस्थाको बारेमा नेपालले पुर्नविचार गर्न भनेपछि बैंकको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ। अघिल्लो वर्षको..
११८ नाघेको डलर एक महिनामै ११२ रुपैयाँमा झर्यो
काठमाडौं । एक अमेरिकी डलर बराबर ११८ रुपैयाँ नाघेको अमेरिकी डलरको मूल्य एक महिनामै ११२ रुपैयाँमा झरेको छ। कात्तिक १५ गते डलरको बिक्रीदर मूल्य ११८ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा खरिददर मूल्य..
भारतबाट तीन महीनामा ५० अर्बको तेल, ३१ अर्बको गाडी, २४ अर्बको फलाम आयात
काठमाडौं । देशले तीन महीनामा भारतबाट रु ४९ अर्ब ५९ करोडको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको असोज महीनासम्ममा पेट्रोलियम..
खाली सटरमा ‘सलामी आतङ्क', व्यवसायमा भन्दा सलामीमा बढि लगानी गर्नु पर्ने
काठमाडौं । नारायणगढ बजार क्षेत्रमा खाली सटर भाडामा लिने व्यवसायीले ‘सलामी’ वापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । घरधनीले खाली सटर दिँदा मात्रै होइन एक व्यवसायीले व्यापार छोडेर..
ब्यापारबारे अमेरिकाले लगाएका गलत आरोप असैह्य: चीन
बेइजिङ। वासिङ्टनले गैरकानूनी व्यापार गतिविधिबारे चीनमाथि लगाइएका पछिल्ला आरोपहरू बेइजिङलाई ‘स्वीकार्य नहुने’ चीनले जनाएको छ । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुकका राष्ट्रप्रमुखबीच जी–ट्वान्टी सम्मेलनको अवसरमा महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुने चर्चा चलिरहेका..
काठमाडौं । नेपाली तयारी पोशाक शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन संयुक्त राज्य अमेरिका सकारात्मक देखिएको छ। नेपालले गरेको भन्सार सुविधाको आग्रहलाई सकारात्मक लिँदै अमेरिकाको ‘अमेरिकी ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ’ (युएसटिआर)ले कानूनी प्रक्रिया..
सुविधा कटौतीको विरोधमा २५० कपडा उद्योग बन्द
काठमाडौं । नेपाली कपडा उद्योगीहरुले शनिबारदेखि कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकार लामो समयदेखि दिइरहेको सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत कटौती गरेको विरोधमा उनीहरूले यस्तो गरेका हुन्। नेपाल कपडा उद्योग संघकाअनुसार..
बढी कर तिर्नेमा सूर्य नेपाल र सिद्धार्थ शमशेर, धेरै कर तिर्ने व्यक्ति र संस्था सम्मानित, बैंक वित्तिय संस्थातर्फ नबिल बैंक
काठमाडौं । सरकारले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न विद्यामा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सातौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न..
भारतलाई अष्ट्रेलियाले उजुरी हाल्दै, चिनीका कारणले सम्वन्ध चिसियो
सिड्नी। अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा उजूरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ । विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पुर्याएको अस्ट्रेलियाको..
निगमले भन्योः संस्था उच्च जोखिममा छ, आर्थिक सहायता चाहियो, घट्यो निगमको बजार हिस्सा
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले संस्था उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले तत्कालै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने बताएको छ । बिहीबार अध्यक्ष मदन खरेलले स्वेतपत्र जारी गर्दै निगमको कर्जा अत्याधिक रहेको र ब्याज..
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम तेलको मूल्यमा भारी गिरावट, नेपालमा कस्तो पर्छ असर ?
काठमाडौं । ओपेकको मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ।पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संस्था (ओपेक) ले मंगलबार आफ्नो मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो..
सिंगल डेको कारोबार ३० अर्ब डलर, नेपालमा असफल
चिनियाँ इकमर्श कम्पनी अलीबाबा ग्रुपले आइतबार सिंगल डे को बिक्रीमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । २४ घण्टामा विश्वभरका मानिसले निकै नै खरिद गरेका थिए । सेलको पहिलो घण्टामा १० अर्ब..
शोधनान्तर घाटा ६ वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलनका कारण मुलुकको शोधनान्तर घाटा ६ वर्षयताकै उच्च भएको छ । निकासीको तुलनामा पैठारी व्यापारको हिस्सा अत्याधिक वृद्धि हुन थालेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । मुलुक..
यस कारणले लक्ष्मीपूजामा विद्युत खपत घट्यो
काठमाडौँ। यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन देशभर घरायसी ग्राहकले कूल एक हजार १०५ मेगावाट विद्युत् प्रयोग गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दन कुनै पनि घर अँध्यारो बस्न नपरोस् भन्ने मान्यताका साथ..
तिहारकै दिन सरकारद्वारा सातदोबाटोस्थित सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टमा छापा, गुणस्तरहीन सामान जफत
काठमाडौं । सरकारले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको ड्राइ फुड्स् जफत गरेको छ । तिहारमा अति आवश्यक खाद्य बस्तुको बिक्री केन्द्रको अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको सरकारी टोलीले अनुगमनको क्रममा म्याद नाघेको..
अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले तेल बिक्री गर्ने, ‘अमेरिकाले इरानी तेल बजार विस्थापित गर्न सक्दैन
इरान। अमेरिकी ‘कठोर’ आर्थिक प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले तेलको कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने राष्ट्रपति हसन रौहानीले बताएका छन्। इरानले वासिङ्टनद्वारा आफुमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई ‘उचित’ रूपले तोड्नेछ, अमेरिकाले इरानविरुद्ध सोमबारदेखि लागु हुनेगरी..
यसरी हुँदैछ तिहार झिलिमली : ६० करोडको बत्ती आयात, ९० प्रतिशत बत्ती चीनबाटै
काठमाडौं । उज्यलो पर्व तिहारमा झिलिमिली बिजुली बत्ती जोडने प्रचलन पुरानै हो । शहरमा मात्रै होइन, गाउँघरमा पनि तिहारमा झिलिमिली बत्ती जोड्ने प्रचलन सामान्य बनेको छ । त्यसैले विभिन्न किसिमका..
योगगुरु रामदेवले अबदेखि जिन्सको पाइन्ट पनि बेच्ने, मुल्य ११ सय
काठमाडौं । योग गुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतन्जलीले कपडा व्यवसायमा प्रवेश गरेका छन् । धनतेरसको अवसरमा ‘पतन्जली परिधान’को पहिलो शोरुमको उद्घाटन योग गुरु रामदेव गरे । नयाँ दिल्लीको नेताजी शुभाष प्लेसमा..
२ खर्ब ६० अर्ब राजश्व सङ्कलन, वीरगञ्ज भन्सार पहिलो
काठमाडौँ । सरकारले कूल लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५्७६ को हालसम्म दुई खर्ब ६० अर्ब ६८ करोड २६ लाख बराबरको राजश्व..
हिमालयन डिष्टिलरीको लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरीले २०७४/७५को नाफाबाट शेयरधनीलाई प्रतिशेयर रू २१ दशमलव ०५ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको कात्तिक १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नगद लाभांश वितरण..
चीनले सित्तैमा बनाइदियो विश्वकै ठूलो आयात एक्स्पोमा नेपाली पेभेलियन
काठमाडौं । चीनले सांघाई शहरमा कार्तिक १९ देखि २४ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको पहिलो ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्स्पो २०१८’ मा नेपालको सहभागिताको सबै तयारी पूरा गरेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार..
शोधनान्तर घाटा झनै चुलियो, चालू खाता ३५ अर्ब ५६ करोड घाटामा
काठमाडौं । दशैँ, तिहार तथा छठ पर्व लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण मुलुकको शोधान्तर घाटा उच्च दरले चुलिएको छ । त्यस्तै समिक्षा अवधिमा चालु खाता घाटामा..
विश्व चर्चित ११.११ सेल डे, पहिलो पटक नेपालमा, कार्तिक २५ गते ग्र्यान्ड सपिङ
काठमाडौं। अनलाइन मार्केट दराजले नेपालमा पहिलो पटक सेल डे ल्याउने भएको छ। ११.११, संसारको सवैभन्दा ठूलो सेल डे हो। ११.११ को शुरुवात सन् २००९ मा भएको थियो। जब दराजको अभिभावक कम्पनी,..
कात्तिक १५ देखि उद्योग बन्द गर्ने कपडा उद्योगीको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल कपडा उद्योग संघले सरकारले कात्तिक १५ गतेदेखि मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको संघले..
तीन महिनामा पौने ४ खर्बको आयात, सरकारलाई १ खर्ब राजस्व
काठमाडौैं । चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशत बढी राजश्व आम्दानी भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा कूल १ खर्ब अर्ब २४ करोड राजश्व..
‘छक्का पन्जा ३’ले २ दिनमा २ करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौं । बुधबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ले बम्पर कमाई गरेको छ । चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिन वुधबार १ करोड ३० लाखको ग्रस कलेक्शन गरेको यसको निर्माणपक्षले बताएको छ..
काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिई ठगी गरेको भन्दै जमलस्थित द कोरियन सपमा शिलबन्दी गरेको छ। विभागको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा उक्त पसलका सञ्चालकले ५०० प्रतिशतसम्म..
दशैंको खसि प्रतिकिलो मूल्य ५ सय, च्याङ्ग्राको ७ सय रुपैयाँ निर्धारण, भोलीबाट बिक्री शुरु
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले यो वर्षको दशैंका लागि खसि बोकाको मूल्य तोकेको छ । गतवर्षको तुलानमा यो बर्ष खसिबोकाको मूल्य सामान्य बढेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानका अनुसार यो पटक..
स्वदेशमा उत्पादित बस्तु विदेश निकासी गर्दा यसरी लिन सकिन्छ छुट सुविधा
काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५मा उद्योगहरुले पाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल सम्वन्धी सुविधा र सहुलियतका बारेमा जानकारी दिईएको छ । धेरै उद्योगी..
केएल टावरको दशैंतिहार उपहार योजना
काठमाडौं । चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको केएल टावरले चाडपर्वको अवसर पारेर रमाईलो दशैं तिहार उपहार योजना संचालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा ग्राहकले प्रत्येक दिन हात खाली नजाने उपहार पाउने टावर..
Results 889: You are at page6of 30